အာခီယိုတီးရစ်ငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
Temporal range: Late Jurassic (Tithonian), 150.8–148.5 Ma
Wagner, 1862 vide Woodward 1862 nomen rejectum
Owen 1862 vide Woodward 1862 nomen rejectum
(Owen 1862 vide Woodward 1862) Owen 1862 vide Brodkorb 1863 nomen rejectum
Owen, 1862 (rejected name)
(Dames, 1897) Peteronievics vide Petroneivics & Woodward 1917
Petronievics, 1917 (rejected name)
(Howgate, 1984) Howgate 1985
အာခီယိုတီးရစ်ငှက် (Archaeopteryx) (/ˌɑːrkiːˈɒptərɪks/, lit. 'old-wing') သည် ငှက်နှင့်တူသော ဒိုင်နိုဆောများ၏ မျိုးစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းဂရိဘာသာစကား ἀρχαῖος (archaīos ရှေးဟောင်း) မှ ဆင်းသက်လာပြီး πτέρυξ (ptéryx ငှက်မွေး သို့မဟုတ် အတောင်ပံ) ဟု ဆိုလိုသည်။ ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းနှင့် ၂၁ ရာစုအစောပိုင်းတွင် အာခီယိုတီးရစ်ငှက် ကို နိခါတကဗေဒပညာရှင်များနှင့် ကျမ်းကိုးစာအုပ်များက ရှေးအကျဆုံးငှက်ဟု လက်ခံထားကြသည်။ ယင်းငှက်ထက် သက်တမ်းပိုရင့်နိုင်ခြေရှိသည့် Anchiornis, Xiaotingia နှင့် Aurornis ဟုခေါ်သော အခြားငှက်များကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။ အာခီယိုတီးရစ်ငှက် သည် ဂျူယက်စစ် ကာလနှောင်းပိုင်း လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်း ၁၅၀ အကြာက ယခု ဂျာမနီနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ ငှက်ကျား အရွယ်အစားနှင့် ဆင်တူပြီး အကြီးဆုံးအရွယ်အစားမှာ ကျီးကန်း (raven) အရွယ်ခန့် ရှိနိုင်သည်။ အာခီယိုတီးရစ်ငှက်၏ အကြီးဆုံးမျိုးစိတ်သည် အလျား ၀.၅ m (၁ ft ၈ in) ခန့် ကြီးထွားနိုင်သည်။ ယင်းငှက်တို့သည် တွားသွားသတ္တဝါတစ်မျိုးမှ ငှက်အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းနေဆဲကာလတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော သွားများပါရှိသည့် သတ္တဝါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ငှက်များကဲ့သို့ အတောင်ပံခတ်၍ ပျံသန်းခြင်းမပြုနိုင်သော်လည်း အတောင်ကိုဖြန့်၍ မြင့်ရာမှနိမ့်ရာသို့ လေဟုန်စီးပျံသန်းနိုင်သော သတ္တဝါဖြစ်သည်။ အာခီယိုတီးရစ်ငှက်သည် ငှက်၏မူလဇာတ်မြစ်ကို လေ့လာရာတွင် အရေးပါသည်သာမက ဒိုင်နိုဆောများကို လေ့လာရာ၌လည်း အရေးပါအရာရောက်သည်။ ၁၈၆၁ ခုနှစ်တွင် အာခီယိုတီးရစ်ငှက်၏ နမူနာအပြည့်အစုံကို ကြေငြာခဲ့သည်။ နှစ်အတော်ကြာသော် အာခီယိုတီးရစ်ငှက်၏ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း ၁၀ ခုကို ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အာခီယိုတီးရစ်ငှက်၏ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများတွင် အတောင်ပံကို တွေ့ရှိခြင်းသည် အရေးပါလှသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အတောင်ပံများသည် အဆင့်မြင့်ပုံစံတမျိုးဖြစ်ပြီး ယင်းကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများက ညွန်ပြနေသည်မှာ အတောင်ပံများ၏ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုများသည် ဂျူယက်စစ် ကာလခေတ်နှောင်း မတိုင်မီကတည်းက စတင်ခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ အာခီယိုတီးရစ်ငှက်သည် ချားလ်စ်ဒါဝင်၏ ဆင်းကဲပြောင်းလဲမှု သီအိုရီကို ထောက်ခံပေးသည့် အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟု ထင်မှတ်ရသည်။
↑ Troodontidae Gilmore, 1924။
↑ "An Archaeopteryx-like theropod from China and the origin of Avialae" (28 July 2011). Nature 475 (7357): 465–470. doi:10.1038/nature10288. PMID 21796204. Archived 20 December 2016 at the Wayback Machine.
↑ "A Jurassic avialan dinosaur from China resolves the early phylogenetic history of birds" (2013). Nature 498 (7454): 359–362. doi:10.1038/nature12168. PMID 23719374. Bibcode: 2013Natur.498..359G.
↑ Erickson, Gregory M. (2009). "Was Dinosaurian Physiology Inherited by Birds? Reconciling Slow Growth in Archaeopteryx". PLOS ONE4(10). doi:10.1371/journal.pone.0007390. PMID 19816582. Bibcode: 2009PLoSO...4.7390E.
↑ ကျော်ညွန့်လွင်; ခင်မမသွင် (၂၀၀၃)။ မြန်မာနိုင်ငံ ငှက်များ။ ချိုတေးသံစာပေ။
↑ P. Wellnhofer (2004)။ "The Plumage of Archaeopteryx"။ in Currie PJ၊ Koppelhus EB၊ Shugar MA၊ Wright JL (eds.)။ Feathered Dragons။ Indiana University Press။ pp. 282–300။ ISBN 978-0-253-34373-4။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာခီယိုတီးရစ်ငှက်&oldid=728216" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။